Labels: London sharing
kotoe 2:34 am
CMS ရေ .. မောင်တစ်ရွာ မယ်တစ်မြို့ ဆိုတာလေးလည်း ထည့်လိုက်ပါအုံး။
မောင်ရယ် ဆောင်းအမှီရောက်အောင် ပြန်ခဲ့စေချင်တယ် .. ဆိုတဲ့ စာသားလေးကတော့ .. အင်း .. အင်း
စဉ်းစားစရာ .. ဟိုစာသားလေးကလည်း အမိုက်သားဗျ .. ဘာတဲ့ .. ၀ါဆိုဝါခေါင်မှာကွယ် ရွှေမိုးလေးတွေ ညိုတော့ ..
ချစ်တင်းနှောခဲ့တာရယ် အို .. ရွှေမိုးလေးကညိုတယ် .. အဲဒီထဲက ချစ်တင်းနှောတယ် ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ။
ခေတ်ဟောင်း အဆိုတော်တွေရဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တမ်းချင်းတွေက နောက်ပိုင်းခေတ်စာသားတွေမှာ မတွေ့ရသေးဘူးဗျ။
kotoe 2:37 am
CMS ရေ ရွှေမန်းသားအားလုံးရဲ့ မန်းတလေးလွမ်းကျပုံတွေကိုတော့ လေးစားတယ်ဗျာ။ တစ်နေ့ အားလုံးဆုံခွင့်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
CMS 2:43 am
ဟုတ်ကဲ့ ... ကိုတိုး .. ကျွန်တော်တို့အားလုံး တစ်နေ့မှာတော့ မန်းလေးမှာ ဆုံဖြစ်ကြမှာပါဗျာ .. ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပါတယ်။ ဆုံလည်းဆုံချင်ပါတယ်ဗျာ။ တကယ်ပါ။
Zaw Moe Aung 7:51 am
ဆုံချင်ရင် လာခဲ့ကြလေ ....။
အောင်မယ်လေး မန်းသားချင်း လွမ်းနေကြတယ် သမီးတို့လည်း လွမ်းပါတယ်နော် ပါးစပ်ကသာ ထုတ်မပြောတာ လွမ်းလို့အရည်ပါပျော်နေပြီ :D
awaykalamin 5:11 pm
မောင်ချမ်းကတော့ ရောက်တာမှမကြာသေး လွမ်းနေလိုက်တာ မန်းလေးဆောင်ကိုလွမ်းလိုက် မင်းသီဟကိုလွမ်းလိုက် သူငယ်ချင်းကိုလွမ်းလိုက်နဲ့…. လွမ်းစရာတွေများလှပါလား…
CMS 6:03 pm
အစ်မပြောလည်း ခံရတော့မှာပဲဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း မန်းလေးမှာ မမွေးခဲ့ရင်ကောင်းသား
kyawmintun 12:26 am
ခင်ဗျား ……….. ဖက် စရာ မရှိလို့ နေမှာပေါ့ ။
CMS 12:48 am
ဖက်စရာကတော့ ဖက်လုံးပဲရှိတယ်ဗျ :)
Myo Kyaw Htun 3:26 am
boedawgyi 10:11 am
phyo nge 2:34 pm
When I waiting the bus in the early morning, do u know wht I am thinking abt.. Mdy..Sometimes, I am really proud that how beautiful Mdy is.
same to u ! guy :)